राजपा र समाजवादीलाई थ्रेसहोल्डको डर छ (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » राजपा र समाजवादीलाई थ्रेसहोल्डको डर छ (अन्तरवार्ता)
राजपा र समाजवादीलाई थ्रेसहोल्डको डर छ (अन्तरवार्ता)
–अध्यक्षमण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल
वामपन्थी राजनीतिबाट मधेश राजनीतिमा आउनु भएका महेन्द्रराय यादव अहिले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच एकताका गराउने अभियानमा लाग्नुभएको छ । एमालेबाट विद्रोह गरेर निस्किनु भएका उहाँले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्नुभएको थियो । तर उहाँ त्यो पार्टीबाट अलग भएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्नुभएको थियो पछि तराई मधेश सद्भावना पार्टी बनाउनु भएको थियो । छवटा विभिन्न दल मिलाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गर्नमा विशेष भूमिका खेल्नु भएका यादव अहिले समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको अभियानमा लाग्नुभएको छ, प्रस्तुत छ, एकीकरण प्रकृया, पार्टीको अगामी योजना तथा महाधिवेशन लगायतको विषयमा सहारा टाइम्सले राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवसँग गरिएको कुराकानीः
समाजवादी पार्टी, नेपालसँग एकीकरण गर्नुपर्छ भनि पुरै लाग्नु भएको के त्यो सम्भव छ ?
–समाजवादी पार्टीसँग मात्र होइन राजपा नेपालले विचार, सिद्धान्त मिल्ने अन्य दलहरुसँग पनि एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा समाजवादी पार्टी लगायत अन्य साना दलहरुको दलहरुको पनि कुराकानी भइरहेको छ । सम्भव किन छैन, आदिवासी जनजाति, मधेशी उत्पीडनमा परेका समुदायको माग नै एकीकरण गर्नु हो, त्यसैले यो सम्भव छ । जनताको अगाडि कसैको चल्दैन । यो देशमा जबसम्म आफ्नो शक्ति निर्माण गर्दैन तबसम्म जति जे गरेपनि अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले पहिला आफ्नो शक्ति बनाउनुपर्छ ।
अन्य दल भन्दा समाजवादी पार्टीप्रति अलि बढी नै झुकाव देखिएको छ किन ?
–झुकाव भन्न मिल्दैन । त्यसलाई आवश्यकता बुझ्नु पर्छ । हामी सँगै चुनाव लड्यौं, सँगै आन्दोलन गर्यौं, प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका छौं । यति कुरामा सहमति हुँदा हुँदै एउटै पार्टी किन नबनाउने भनि जनताको चाहना रहेको छ । सहिद परिवार, घाइते, आन्दोलनकारीको चाहना नै दुई पार्टीबीच एकता होस् । त्यही भएर हामीले एकता प्रकृयालाई अगाडि बढाएका छौ । यसमा झुकाव सुकावको कुनै कुरा छैन ।
असोजमा महाधिवेशन गर्ने भन्नु भएको थियो, महाधिवेशन पहिला हुन्छ कि पार्टी एकता ?
–एकताको महाधिवेशन गर्ने कुरा भइरहेको छ । समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि एकताकै महाधिवेशन गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ हेरौं के हुन्छ । पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनि पार्टीबाट निर्णय गरी जिल्ला जिल्लामा त्यसको सर्कुलर पठाउने काम पनि भएको थियो । त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको थियो तर यही बीचमा समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने र महाधिवेशन पनि गर्ने भनि पार्टीले निर्णय गर्यो । एकता नै गर्ने हो भने एकताकै महाधिवेशन होस् भनि धेरै नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाई रह्यो । अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गरेका उत्पीडित समुदाय, मधेशी जनताले पनि एकता नै हुनुपर्छ भनि सल्लाह सुझाव दिन थाले । हिमाल, पहाडका उत्पीडित समुदायले यो एकीकरणको कुरालाई लिएर निकै खुशी भएका छन् । दुवै पार्टीबीच समानजनक स्थितिमा एकीकरण हुनुपर्छ यसमा ढिलाई गर्नुहँदैन ।
तर तपाईकै पार्टीका अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले पार्टीको महाधिवेशन गरेर मात्र पार्टी एकताका लागि अगाडि बढ्ने भनिरहनु भएको छ नि ?
–एकता र महाधिवेशन गर्ने भनि पार्टीमा निर्णय भएको छ । अब कुन पहिला गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ । आखिर एकता गर्नु नै छ भने महाधिवेशनमा किन जाने, मेरो तर्क रहेको छ । अहिले महाधिवेशन गर्ने अनि फेरि तुरुन्तै एकीकरण गर्ने यो कुनै तर्क होइन, फजुल खर्च मात्रै हो । एकीकरण गरेर तुरुन्तै एकताको महाधिवेशन गर्दा सङ्गठन हितमा हुन्छ जस्तो लाग्छ । एकताको प्रकृया अगाडि बढी सकेको छ । चिठी अदान प्रदान पनि भएको छ । दुई पक्षको बीचमा अनौपचारिक छलफल पनि अगाडि बढी सकेको छ । तर महाधिवेशनको अहिले कुनै तयारी छैन । असोजमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय भएको छ तर पार्टीमा त्यसको कुनै तयारी छैन । सदस्यता वितरण भएको छ, त्यसको प्रतिवेदन आइसकेको छैन । जिल्ला तथा पालिकामा अधिवेशनहरु बाँकी नै छन् । यी सबै कुरा नभएसम्म महाधिवशेन पनि सम्भव छैन । यदि एकता गर्ने नै हो भने दुई पार्टीबीच एकता गरेर एकताको महाधिवशन गर्दा नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ । एकता प्रकृया जति ढिलो हुन्छ, महाधिवेशनमा त्यति नै असर पर्छ ।
तपाईको कुरा सुन्दा त एकता प्रकृया धेरै अगाडि बढी सकेको छ, अब टुग्यांउन मात्र बाँकी छ जस्तो लाग्छ के के विषमया कुरा मिलेको छ त ?
–अहिले जेजति कुरा भएको छ सबै अनौपचारिक मात्र हो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक रहनु भएका राजेन्द्र महतोले समाजवादी पार्टीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ । के के विषयमा कुरा मिलेको छ, कुन मोडालिटीमा कुराहरुको अगाडि बढीरहेको छ त्यो कुरा त उहाँले मात्र भन्न सक्नुहुन्छ । तर म यति भन्छु वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढी रहेको छ । एकीकरणको विकल्प छैन । एकीकरण हुन्छ ढुक्क भए हुन्छ ।
समाजवादी पार्टीसँग वार्ता हुन्छ तर त्यसको जानकारी पार्टीमा हुँदैन भन्ने कुरा तपाईको कुराको पनि पुष्टि हुन्छ, तपाईले पनि के के विषयमा कुराकानी भइरहेको छ त्यो थाह छैन भन्नुहुन्छ उता पार्टीमा पनि एकीकरणको बारेमा वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले केही थाह छैन भनिन्छ वास्तविकता के हो ?
–होइन, त्यस्तो छैन । पार्टीलाई सबै जानकारी छ । पार्टी सबै कुरामा अपडेट छ । अध्यक्षमण्डलकै बैठकमा वार्ता समितिका संयोजकले समाजवादी पार्टीसँग भएको छलफलका बारेमा जानकारी दिनुभएको छ । जति कुरा भएको छ त्यति न भन्ने हो । नभएको कुरा भनेर हुँदैन । जे कुरा भएको छैन त्यो भन्नु पनि हुँदैन । कुन नेताले के बोलिरहनु भएको छ त्यतातिर म जान्न चाहन्न । आआफ्नो कुरा राख्ने सबैको स्वतन्त्रता छ । वार्ता समितिका संयोजकले अनौपचारिक छलफलमा लागिरहनु भएको छ । अन्य नेताहरुले पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाएको छ । त्यतिकै पनि कम्युनिस्ट र काँग्रेसले समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण नहोस् भनि चाहेका छन् । मधेशवादी दलहरु कमजोर भइरहोस् भनि उनीहरुको चाहना हुन्छ । पाँच प्रतिशत थ्रेस होल्ड लगाउँदैछ, त्यसबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ । पार्टी जोगाउनु भन्दा पनि मधेशको मुद्दा जोगाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो । अधिकार र पहिचान जुन अधुरा प्राप्त भएको छ, त्यसलाई पुरा गर्न सविधान संशोधन हुनुपर्छ र सविधान संशोधनका लागि दलहरुको बीचमा एकता हुनु आवश्यक छ । दुईटा कम्युनिस्ट मिल्ने अवस्थामा थिएन, मिल्यो । हाम्रो त झन मुद्दा मिल्छ, विचार मिल्छ । त्यसैले मिल्नु आवश्यक छ ।
राजपा नेपाल बनेको यत्रो भइसक्यो तर अहिलेसम्म पार्टीले पूर्णता भएको छैन भने समाजवादी पार्टीसँग के आधारमा कसरी एकीकरण गर्नुहुन्छ ?
–कसले भन्छन् राजपा नेपाल निर्माण भएको छैन ? यदि बनेको छैन भने यो देशको तेस्रो ठूलो पार्टी कसरी बन्यो ? राजपा नेपालले प्रदेश २ मा सरकार गठन गरेको छ । स्थानीय तहमा सरकार बनाएको छ । सदनदेखि सडकसम्म आफ्नो पकड बनाएको छ । अनि राजपा बनेको छैन कसरी भन्नुहुन्छ । सबै जनवर्गीय संगठनहरु निर्माण भएको छ । सबैले आआफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । पार्टीको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको छ । पार्टीका थुप्रै नेताले बलिदानी दिएका छन्, घाइते भएका छन् । यदि पार्टी नभएको भए कसरी यो सब हुन्थ्यो त । त्यसैले राजपा नेपाल निर्माण भएको छैन भन्नु गलत हो । हो एउटा कुरा सही हो, संगठनका काम जसरी हुनुपथ्र्यो त्यसरी भइरहको छैन । हाम्रो संगठन छैन भने समाजवादी पार्टीसँग बराबरको हैसियतमा एकीकरण गर्ने कुरा कसरी भइरहेको छ त ? त्यसैले राजपाको बारेमा धेरैलाई भ्रम छ त्यो भ्रम हटाउँदा राम्रो ।
तपाईले पनि तमलोपाबाट विभाजन गरेर छुट्टै पार्टी बनाउनु भएको थियो, अहिले फेरि एकतामा जोड दिइरहनु भएको छ किन ?
–यो समय समयको कुरा हो । समयले के माग गर्छ त्यसैको आधारमा काम हुन्छ । त्यो बेलाको परस्थिति त्यस्तै थियो । अलग हुनुपर्यो, अहिले परस्थिति फेरिएको छ, हामी जुटेका छौं । इतिहासले सबै कुरा सिकाउँछ । हामी इतिहासप्रति विश्वास गर्छौ । पार्टी विभाजन भएपछि लोकतन्त्रलाई नोक्सान पुगेको छ । जनता र कार्यकर्ताको मनोबल कम भएको थियो । जनता कार्यकर्ता अझै आन्दोलन गर्न तयार छ । मलेठमा भएको कार्यक्रममा नै हामीले घोषणा गरेका थियौं कि सबै दलको बीचमा एकीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि हामी छ दलको बीचमा एकीकरण गर्यौं । सहिद तथा घाइते परिवारले समाजवादी पार्टी र राजपा बीच पनि एकीकरण हुनुपर्छ भनि चाहना राखेको छ । जसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ । अहिले समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको प्रकृया शुरु भएको छ ।
विगतमा पार्टी फुटाएर गल्ती गरेको छु जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
–गल्ती गरेको छु जस्तो लाग्दैन मलाई । मैले अघि नै भनेको थिए कि त्यतिबेलोको अवस्था अलि फरक थियो । र, अहिलेको अवस्था फरक छ । त्यतिबेला किन पार्टी विभाजन भएको थियो त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । त्यतिबेला पार्टीमा विधि र प्रकृयाको अभाव थियो । विधानमा समान जनसँख्याका आधारमा, जातीय जनसँख्याको आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएको थिएन । एकल जातीय आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, टीका प्रथाको शुरु भएको थियो । त्यो कुराको मैले विरोध गरेर अलग भएको थिए । अहिलेको सविधानमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यसको आधारमा विधि विधान चल्नुपर्छ भने मेरो मान्यता हो । त्यतिबेलाको विधान राम्रो भइ दिएको भए विभाजन हुँदैन्थ्यो ।
के अहिले सबै कुरा ठिक छ त तपाईको पार्टीमा ?
–हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म पूर्ण विधान बनेको छैन । हामीसँग अहिले काम चलाउ संक्षिप्त विधान छ । महाधिवेशनसम्मका लागि विधान बनाउने काम कार्य भइरहेको छ । अहिलेको जुन विधान छ हाम्रो त्यो समावेशी, लोकतान्त्रिक चरित्रको छ । मनोनित प्रथालाई हटाइएको छ । अब बन्न लागेको सविधान त झन समानुपातिक समावेशी, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हुन्छ । अहिले विधान बनाउँदा सविधानले नै गाइड गरिरहेको छ त्यसले पहिलाको जस्तो समस्या छैन । त्यसैले अब यो पार्टी फुट्ने होइन, जुट्नुपर्छ । र, त्यसको प्रयास भइरहेको छ ।
समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरिरहनु भएको छ तर तपाईहरु सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु भएको छ, यसअवस्थामा एउटा सत्तापक्ष र एउटा विपक्षमा रहेर पार्टी कसरी एकीकरण हुन्छ त ?
–दुई पार्टीबीच एकीकरणको कुरा मिलेपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने छ । अहिले एकीकरण भएकै छैन अहिले नै उनीहरुलाई सरकारबाट बाहिरिन भन्दा उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ । मानौ हामीले दवाव दियौं र समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट निस्कियो पनि । यदि भोली गएर एकीकरण भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छन्, त्यसैले त्यस्तो रिश्क लिएर काम गर्नुहुँदैन । एकीकरण भएपछि सरकार छाड्ने कुरामा समाजवादी पार्टीका नेताहरु तयार छन् । उहाँहरुले बाहिर पटक पटक कुरा उठाईरहनु भएको छ । यता, वार्ता समितिहरुको बीचमा पनि यो विषयमा कुरा भइरहेकै होला । अहिले नै हामी सरकार छाड्ने दवाव दिनेछैनौ । एकीकरणको टुगों लगोस् अनि त्यस विषयमा पनि हामीले समाजवादी पार्टीसँग कुरा गर्छौ ।
राजपा नेपालले संसदमा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक, सविधान संशोधन, गैरन्यायीक हत्या लगायतको विषयमा संसदमा अवाज उठायो, संघर्ष गर्यो तर राजपाले एकीकरण गर्न लागेको समाजवादी पार्टी मौन रह्यो किन ?
–समाजवादी पार्टी सत्तारुढ दल भएकाले त्यसको पनि एउटा धर्म कर्तव्य रहेको छ । यद्यपी हामीबीचमा यो विषयमा पनि कुराकानी भइरहेका हुन्छन् । एकीकरण भएपछि एउटै संगठन, एउटै संरचना भएपछि सदनमा पनि एउटा शक्तिको रुपमा देखिन्छ त्यसपछि कुरा उठाउँदा एउटा दवाव पर्न सक्छ । समाजवादी पार्टी पनि सविधान संशोधन, लाल आयोगको विषयमा कुरा उठाई रहेका हुन्छ । बेलाबेलामा बोलिरहेको हुन्छ तर प्रतिपक्ष जस्तो बेल्न मिल्दैन उसको पनि बाध्यता रहको छ ।